Yiyiphi ingqiqo yokuCinga? I-Open-Mindiness
Ukuseka Umgama Wengqondo Neengqiqo phakathi kwakho kunye neengcamango zakho
Igama elithi "ukucinga ngokucokisekileyo" lisetyenziswe, ngenye indlela okanye enye, kulo lonke le sayithi - kodwa lithetha ntoni? Abanye banokucinga ukuba kuqukwa nje ukufumana iimpazamo kwabanye kunye nembono zabanye, kodwa akunjalo. Njengomgaqo oqhelekileyo, ukucinga okubalulekileyo kuquka ukuphuhlisa umgama othile wengqondo kunye nengqiqo phakathi kwakho kunye neengcamango-nokuba yeyakho okanye abanye-ukuba uhlalutye kangcono inyaniso, ukuqinisekiswa kunye nokuqiqa.
Ukucinga okucwangcisekileyo ngumzamo wokuhlakulela ukuvavanya, ukuqiqa ngokucacileyo malunga noko kulungile ukuba sikholwe kwaye singakholelwa. Ukucinga okucwangcisayo kusetyenziswa izixhobo zengqondo kunye nesayensi kuba zixabisa ukungazithembi ngokugqithisa okanye ukukhohlisa, ukuqiqa ngokholo, inzululwazi yesazi, kunye nokuqonda ngokucinga. Ukucinga okubalulekileyo akuqinisekisi ukuba siya kufika eqinisweni, kodwa kwenza kube lula kunokuba kukho naziphi ezinye iindlela.
Ukucacisa ingcamango yokucinga engundoqo kungaba lula xa sibheka kwezinye iimpawu ezibalulekileyo eziyimfuneko yokucinga ngokuthe ngqo ngento ethile:
Umntu onqwenela ukucinga ngokuchanekileyo malunga nento efana nezopolitiko okanye inkolo kufuneka ivulekele ingqondo. Oku kufuna ukuba uvuleleke ukuba kungenzeka ukuba abanye abalungile kuphela kodwa kwakhona ukuba uyiphutha. Ngokuqhelekileyo abantu baqalisa ukungabikho ngxabano yeziphakamiso ngokungakhange bathathe naliphi ixesha lokuba baqwalasele ukuba bangaphoswa ngolu hlobo.
Ngokuqinisekileyo, kunokwenzeka ukuba "unomqondo ovulekileyo" kuba akuyiyo yonke ingcamango ifanelekileyo okanye inelungelo elilinganayo lokwenyaniso. Nangona kufuneka sikwazi ukunika ithuba lokuba umntu alungile, kufuneka simele sinike inkxaso ngenkxaso-mabango abo - ukuba abanako okanye abanako, sinokugwetywa ukuba sichithise loo mabango kwaye senze ngokungathi ayinyani.
Ukuhlukana kwemizwelo kunye nesizathu
Nangona sinezizathu ezicacileyo nezicacileyo zokwamkela ingcamango, nathi sinokuba nezizathu zengqondo nezengqondo zokwamkela - izizathu esingazi kakuhle. Kubalulekile ukucinga okucwangcisekileyo, nangona kunjalo, ukuba sifunda ukwahlula ezo zibini kuba ezi zilandelayo zingakwazi ukuphazamisa lula ngaphambili.
Izizathu zethu zokuzikholelwa ukuba kukho into enokuqondakalayo, kodwa ukuba ingqiqo ekholelwa yinto engalunganga, ekugqibeleni akufanele sicinge ukuba inkolelo yethu inengqiqo. Ukuba siza kusondela kwiinkolelo zethu ngendlela engathembekiyo, ngendlela efanelekileyo, kufuneka simele sizimisele ukubeka bucala iimvakalelo zethu kwaye sivavanye ingcamango kunye nokuqiqa ngemigomo yabo-mhlawumbi nokugatya iinkolelo zethu xa behluleka ukuphila ngokubhekiselele kwimilinganiselo enengqiqo ( kubona i-Open-Mindedness).
Uphikisana nolwazi, ungazi
Ngenxa yokuba sisoloko sineengxaki zengqondo okanye ezinye iingqondo zengqondo kwiingkolelo zethu, akuqhelekanga ukuba abantu baqhubele phambili baze bazame ukukhusela ezo nkolelo kungakhathaliseki ukuba ingqiqo okanye ubungqina babo bubuthathaka. Enyanisweni, ngamanye amaxesha abantu baya kulondoloza ingcamango nangona bengayazi into eninzi malunga nayo - bacinga ukuba bayakwenza, kodwa abakwenziyo.
Umntu ozama ukuzithethelela, nangona kunjalo, uzama ukuphepha ukucinga ukuba sele esazi yonke into ayifunayo ukuba azi. Loo mntu uzimisele ukuvumela ukuba umntu ongavumelaniyo unokubafundisa into efanelekileyo kwaye akabaleki ukuphikisana nesimo ukuba ngaba abazi izinto ezibalulekileyo, ezifanelekileyo.
Kukho iingcamango eziyinyaniso kunye neengcamango eziyinyaniso, kodwa ngelixa kulungile ukuba neengcamango eziseqeleni lokugqibela, kufuneka siqonde ukuba iqela lokugqibela lide lide kuncinci kunelokuqala. Nangona kunjalo kukhethwa kungenjalo, asinakuqiniseka ngokupheleleyo malunga nemicimbi emininzi - ngakumbi ezo zinto zijolise kwiingxoxo ezininzi.
Xa umntu ebonisa ukungathembeki kunye nokucinga okucokisekileyo, bakhumbula ukuba ngenxa yokuba bangabonisa isigqibo mhlawumbi , oko akuthethi ukuba babonise okanye bangabonisa ukuba kuyinyaniso.
Ezinye iinyaniso zifuna ukukholelwa okuqinisekileyo, kodwa iinyaniso ezinokwenzeka zifuna kuphela ukugwetyiswa kwetyala - oko kukuthi, simele sibakholelwe ngamandla afana nobu bungqina kunye nesizathu sokuvumela.
Ukuphepha ukungaqondi kakuhle kweziLwimi
Ulwimi luxhobo oluyinkimbinkimbi nolunengqondo. Ivumela ukuba sikwazi ukuthetha zonke iindidi zeengcamango, kubandakanywa iingcamango ezintsha, kodwa ubuqili obunjalo kunye nobunzima bukhokelela kuzo zonke iintlobo zokungaqondani, ukungaboni kakuhle, nokungafani. Inyaniso yolu mbandela kukuba, into esiyicinga ukuba sinxibelelana ngayo ayinokuba yintoni abanye abayifumanayo, kwaye oko esikufumanayo akunakwenzeka ukuba abanye bazimisele ukuthetha.
Iingcamango ezinzulu, ngoko, kufuneka zivumele ukuba kukho ukungahambi kakuhle, ukungahambi kakuhle nokungaqondani kwiintetho zethu. Umntu ozama ukucinga ngokugqithiseleyo kufuneka azame ukuphelisa loo miba ngokungangoko kunokwenzeka - umzekelo, ngokuzama ukufumana imigaqo ebalulekileyo ichazwe ngokucacileyo ekuqaleni kunokuba avume ukuba ingxoxo iqhube kunye nabantu basebenzisa amagama afanayo ukuthetha ngeengcamango ezihlukileyo ngokupheleleyo .
Gwema u Buxoki
Uninzi lwabantu lunokuqiqa kakuhle ngokwaneleyo ukufumana ubomi babo bemihla ngemihla kwaye akukho. Ukuba oko kuwanele ukusinda, kutheni utyalomali ixesha elide kunye nomsebenzi ukuphucula? Abantu abanqwenela ukuba nemilinganiselo ephakamileyo yeenkolelo zabo kunye nokuqiqa, nangona kunjalo, abanako ukwenza ngokuncinciweyo ukuba bafumaneke ebomini-eminye imfundo kunye nezenzo ezifunekayo.
Kule nto, ukucinga okucokisekileyo kukufuna ukuba umntu aziqhelane nezikhokelo eziqhelekileyo eziqhelekileyo abantu abaninzi abazenzayo ngexesha okanye enye ngaphandle kokuyiqonda.
Ubuxoki buyiziphoso ekuqiqweni eziya kwiingxabano kwaye ziphikisana ngazo zonke ixesha; indlela yokucinga engundoqo kufuneka incede umntu aphephe ukuzenza kwaye ancede ekuchongeni ukubonakala kwazo kwezinye iingxabano zabanye. Ingxabano eyenza ubuxoki ayikwazi ukubonelela isizathu esihle sokwamkela isigqibo sayo; Ngoko ke, ngokukhawuleza nje ukuba kukho ukunyaniseka, iingxabano azenzi kakuhle.
Musa ukuya kwizigqibo
Kulula kwaye kuqhelekile ukuba abantu bahambe ngokukhawuleza kwisigqibo sokuqala nesona sicace kunoma yiluphi uhlobo lwesiganeko, kodwa ingqinamba yolu mbandela isiphetho esicacileyo asisoloko sisilungileyo. Ngelishwa, xa umntu esenza isiphelo kunokuba nzima ukuwanikela ukuba bayinike into ethile - emva koko, akukho mntu ufuna ukungahambi kakuhle, ngaba
Kuba kungcono ukuphepha ingxaki kunokuba uzame ukuphuma kwiinkathazo kanye, ukucinga okugxininisa kugxininisa ukucinga ngokucokisekileyo-kwaye oku kuthetha ukungafihli kwizigqibo xa unokuziphepha. Qhubeka kwaye uvume ukuba kukho isiphelo esicacileyo kuba kulungele emva koko konke, kodwa ungamkeli kuze kubekho ezinye iinketho eziye zaqwalaselwa.
Konke oku kusishwankathelo esiphuthumayo sezinye iimpawu ezibalulekileyo abantu kufuneka bahlakulele ukucinga ngokuchanekileyo nangokweqile ngezinto. Nangona kungabonakali ngokukhawuleza, awudingi idigrifi okanye inzululwazi ukuba ube ngumbono ongcono ngakumbi. Iminye imfundo malunga nemiba ephambili iyadingeka, kodwa akukho nto umntu ongenakukwazi ukuyenza.
Ezinye iinkalo zeengcamango ezisisiseko zinokuhlangabezana nobunzima, kodwa ekugqibeleni, kukho enye indlela yokuba ukhululeke ngayo: ukusetyenziswa. Awuyi kuthi, umzekelo, ulungile ekuqapheliseni iimpazamo ngokukhumbuza uludwe lwamagama. Kunoko, kufuneka uthabathe ixesha lokufunda ngenyameko kwaye ufunde ukuchonga izinto ezimbi ngale ndlela. Xa uchitha ixesha elide kuloo nto, iya kuba yendalo ngokwemvelo - kwaye uya kukhumbuza amagama okhohlakeleyo njengento ethile.
Kwakunjalo nangamanye amaqhinga kwisigqibo esisiseko. Ukuba ucinga ngabo kwaye uyisebenzise, ​​ngoko uya kuziva ukhululekile kunye nabo kwaye uqaphele izicwangciso ezithile zobuchule kunye nobuchule kuyo nayiphi na into oyifunayo ngaphandle kokuzama. Isigama esilandelayo siya kulandela. Ukuba unomdla ekusebenzeni, enye indawo efanelekileyo yokufumana uncedo yiforam yeziko lewebhu. Kulapho uza kuba nethuba lokufunda izikhalazo ezininzi kwaye ubone ezininzi zobugcisa ezichazwe kule sayithi. Unokwazi ukubuza imibuzo malunga nokuqinisekiswa okanye ukuvakala kweengxabano ezithile - kukho abantu abaninzi abanokukunceda ukuba uqonde ngakumbi apho ingxabano ihamba kakuhle okanye ifumana izinto ngokufanelekileyo.
Iingcamango zobuqhetseba: iMasoni kunye neNew World Order
U-Albert Einstein Quotes on Life Emva kokufa
Iinkolelo kunye nezinto ezikhethiweyo: Ngaba Ukhetha Inkolo Yakho?
Eleanor, u-Queen of Castile (1162 - 1214)
Ukunyanga i-De Quervain's Syndrome ekhaya
Indlela yokulungisa i-Pantry yakho kwiMimoya eyiNzulu
Yayiyiphi i-Meiji Era?
I-Best Music Director Directors Ukusebenza namhlanje
Arnold Classic Ngomnyaka: Uluhlu lwabadlali bonke - I-Men's Edition
I-20 ye-Funniest Vampire kunye neZombie Clips kwi-Youtube
Ukuguqulwa kweMerika: iMfazwe yaseSiqithi saseValcour
Isibheno seNyuvesi zeDystopian zeNtsha